एजेन्सी : खेलहरुमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबल हो। फुटबल हेरेर नरमाउने मानिस सायद कमै होलान्। तर, निरन्तर फुटबल हेर्नेहरुलाई पनि फुटबलका सबै निती नियमहरुबारे थाहा नहुन पनि सक्छ।
मैदानमा खेल दौरान खेलाडीले ग’म्भीर प्रकृतिको फल गरेमा, अनुशासनको ग’म्भीर उल्लं’घन गरेमा वा खेलको नियमविपरीत काम गरेमा रेफ्रीले ग’ल्ती हेरेर कार’बाहीस्वरुप खेलाडीलाई चेता’वनीका लागि पहेँलो कार्ड दिन सक्छन्।
ठूलो प्रकारको ग’ल्ती भएमा खेलाडीलाई रातो कार्ड दिँदै रेफ्रीले मैदानबाहिर पठाउन पनि सक्छन्। हामीले फुटबलमा यस्तो कार’बाही धेरैपटक देखेका छौं। तर, गोलरक्षकको हकमा यो कमै भएको पाइन्छ। खेल दौरान गोलरक्षकले रातो कार्ड पाएमा के हुन्छ ?
अवश्य पनि अन्य खेलाडीले जस्तै उसले मैदान छोड्नुपर्ने हुन्छ। सो टोली १० खेलाडीमा सिमित हुन्छ। तर, गोलरक्षकले नै मैदान छोडेमा उक्त पोष्टको रक्षा कसले गर्ला ?
यस्तो अवस्थामा उक्त टोलीका प्रशिक्षकले बाँकी १० खेलाडीबाट कुनै एक खेलाडीलाई प्रतिस्थापन गर्दै मैदानमा वैकल्पिक गोलरक्षकलाई पठाउन सक्नेछन्। किनकि गोलरक्षकको जिम्मा डि’फेन्डर, मिड’फिल्डर वा फ’रवार्डलाई दिएमा टोलीलाई ख’तरा हुन सक्छ।
अब यहाँ अर्को प्रश्न उब्जिन्छ। यदि तोकिएको संख्यामा खेलाडीको प्रतिस्थापन अगाडि भइसकेको अवस्थामा के होला ? तोकिएको संख्यामा प्रशिक्षकले खेलाडीहरुको प्रतिस्थापन गरिसकेको अवस्थामा मैदानबाहिरबाट खेलाडी प्रतिस्थापन गर्न पाइँदैन।
प्रशिक्षकले मैदानभित्र बाँकी रहेका १० खेलाडीलेमध्ये उपयुक्त एकलाई गोलरक्षकको जिम्मा दिनुपर्ने छ। स्मरण रहोस् यस किसिमको घ’टना पनि फुटबलमा भएको थियो। सन् २०१२ मा न्यू क्यासलवि’रुद्धको खेलमा लिभरपुलका गोलरक्षक
पेपे रेइनालाई रातो कार्ड दिइएको थियो। तर, उक्त समयमा लिभरपुलले तोकिएको संख्यामा खेलाडी प्रतिस्थापन गरिसकेको थियो। त्यसकारण उसले टोलीका डि’फेन्डर जोस इनरिकलाई गोलरक्षकको जिम्मा दिइएको थियो। -स्वदेश नेपाल
२०७८ असार १२, शनिबार १४:५५ गते 1 Minute 593 Views